May 21, 2022 - Celepedia
ကြည့်မိသူတိုင်း နေချင်စိတ်ဖြစ်သွားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စေမယ့် သူမရဲ့အိပ်ခန်းလေးကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့￼သဇင်ထူးမြင့်
by xyz xyz May 21, 2022 May 21, 2022 0
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရိနေတာကတော့ သဇင်ထူးမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီး အဖေလိုပဲအနုပညာပါရမီရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်းအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ကြော်ငြာလေးတွေလည်းများစွာရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေကိုရိုက်ကူးနေတာပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူမဟာတစ်ချိန်မှာပိုအောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာအသေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ ခုမှာလည်း စိတ်အေးချမ်းရတဲ့နေရာလေးအလုပ်နားရက်ဆို အခန်းထဲအခန်းပြင်မထွက်သူဆိုပြီးသူ့ရဲ့အိပ်ခန်းလေးကိုပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုတောင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကတော့အောက်ကပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပေးသွားကြပါဦးနော်။
ခပ်မိုက်မိုက်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ သဇ်ာမြင့်မိုရ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလှပုံရိပ်လေးတွေကိုအမြဲရိုက်ကူးပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ လူမှုကွန်ရက်မှာပုံရိပ်လေးတွေအမြဲတင်ပေးလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ရှိနေသူပါ။ အခုမှာတော့သူမရဲ့တင်ထားတဲ့စာလေးတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ကိုခုလိုပဲအချက်လက်တိကျစွာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ မင်းသားတစ်လက် မြင်စေရန်.. ဒါမျိုးတွေ မရေးချင် မပြောချင်သော်လည်း.. ယောက်ျားတန်မယ့် စောင်းချိတ်ပြောဆို ရေးသားတတ်သော .. စောင်တင်းပြောတဲ့နေရာ နာမည်ကြီးသူ ကိုယ်တွဲနေတဲ့ မင်းသမီးချစ်သူလေးက.. မိန်းမကောင်းလေးမို့ .. သူများသားသမီးတွေကို လာထိပါးနေတာလားဟင်?မသိလို့ပါ.. ကျွန်မက.. ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ပြတ်လို့တစ်ယောက်တွဲတာ.. (သူများရည်းစား/ သူများယောက်ျား/မိန်းမ) နဲ့.. တွဲနေကြတာလည်း မဟုတ် .. အစ်ကို့စော်လေးလို.. အစ်ကိုရှိလျက်နဲ့သူများ ပေးစာ ကမ်းစာယူနေတာမျိုးအစ်ကိုကိုယ်တိုင် ထိုးကျွေးတာမျိုးEx နဲ့ Date တာမျိုး လက်ရှိနေထိုင်သောနေရာနဲ့ အစ်ကို လိုက်မောင်းနေတဲ့ကားလေးက.. ဘယ်က ရ ထားလဲ? သိလျက်နဲ့ အစ်ကိုရယ်.. အဲဒါကမှ အစ်ကို့နေရာ ဘာလဲ? ညီမက.. မပတ်သတ်ချင်လို့တောင် Unfriend လုပ်လိုက်ပြီး မကြည့်ပဲနေတာလေ.. ဘာအကြောင်းမှ စိတ်မဝင်စားလို့ ခုလို ရက်နည်းနည်းကြာမှ သူများပြမှ သိရတော့.. အခုလို အောက်ဖဲလှန်တာတောင်နောက်ကျသွားလားမသိဘူး..အစ်ကိုအသိဆုံးပါနော်.. သင်္ဇာမြင့်မိုရ်ဆိုတာ.. ​ဘယ်သူ့ ပေးကမ်းစာနဲ့မှ အသက်ဆက်နေတာ မဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ကမ်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ နေလာတဲ့မိန်းမပါ.. မထိခလုတ် ထိခလုတ်နဲ့ -ျင် ထထမယားပါနဲ့.. တန်ရာ တန်ရာတုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်.. အေးချမ်းပါစေနော်..ဪ.. မသိပဲ.. ကိုယ် မှားမှားမှန်မှန် ဘာညာ လာရေးနေသေးတယ် စုံစမ်းပါဦး အဲ့လင်မယားအကြောင်းလည်း.. ဘယ်အခမ်းအနားတွေခိုးတက်ပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ် မ ပြီးပြီလဲ ဆွာ အိပ်ကြပါတော့ဗျာ.. မနက်အလုပ်ပိတ်လည်း.. အိပ်ရေးဝဝအိပ်ကြပါ.. ဆိုပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီး သူမကိုပါ ခေါ်သွားဖို့ ချွဲနေတဲ့ Treasure လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအမြဲချစ်နေရတဲ့မိသားစုလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မိသားစု၃ယောက်ဟာ အမြဲပျော်ရွှင်စရာအပြည့်နဲ့ကြည်နူးဖို့ကောင်းနေတာပါ။ သမီးလေးကလည်း ချစ်စရာကောင်းပြီး အကုန်လုံးရဲ့အချစ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတာပါ။ ဖေဖေ့ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်ပြီးအမြဲ ချစ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပြတက်တာပါ။ မေမေစန္ဒီမြင့်လွင်ကလည်းသမီးလေးနဲ့ဖေဖေတို့ပုံရိပ်တွေကြည့်ပြီးချစ်မဝဖြစ်နေရတာပါ။ သမီးလေးရဲ့video လေးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်အမြဲတင်ပေးလေ့ရှိပြီးချစ်နေရတာပါ။ အခုမှာလည်းဖေဖေအလုပ်သွားချင်တာကိုလိုက်ချင်လို့ချွဲနေတဲ့video လေးကိုတင်ထားတာပါ။ ဘယ်လိုတောင်ချွဲနေလဲဆိုတာကတော့အောက်ကvideo လေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါဦးနော်။
ခြံထဲမှာ ရေပန်းဖွင့်ပြီး တစ်ယောက်တည်း စိမ်ပြေနပြေဆော့ကစားရင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပီလာလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေး ပီလာလေးရဲ့video လေးတွေကိုအမြဲတင်ပေးနေတာကတော့ချမ်းချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးနဲ့တူတူပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပရိသတ်တွေချစ်နေရတာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်းသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးချစ်မဝတွေဖြစ်နေရတာပါ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကပါ ပီလာလေးကိုချစ်မဝတွေဖြစ်နေကြတာပါ။ အလုပ်ပြန်လာတာနဲ့သမီးလေးကိုဆော့ကစားပေးနေကြတာပါ။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့သမီးလေးဟာ မေမေဖြစ်သူနဲ့ဆော့ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျောက်တက်တဲ့အရွယ်လေးဖြစ်တာကြောင့် အမြဲလိုလိုဆော့ကစားနေတာပါ။ ခုမှာလည်းအပင်တွေရေဖျန်းတားတဲ့ရေပိုက်လေးဆီသွားပြီး ရေလေးဆော့နေတာပါ။ ဘယ်လိုချစ်စရာကောင်းနေလဲဆိုတာကတော့အောက်ကvideo လေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါဦးနော်။
လက်ရှိကာလအတွင်း အိမ်ထဲမှာနေပြီး လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြင့် ပြသလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ပိုင်ဖြိုးသုဆိုတာနဲ့ လူကြီးလူငယ်မရွေးပရိသတ်အားပေးမှုတွေရရှိထားကာအောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေများစွာသိမ်းပိုက်ထားတာပါ။ ခုမှာတော့သူမဟာပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာပါ။ မတရားမှုကိုလက်မခံပဲ စည်းစိမ်အောင်မြင်မှုတွေကိုတောင်ထားခဲ့ပြီးအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါ။ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေရှိပေမယ့်လည်း တော်လှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေနဲ့အရင်လိုမတွေ့ရပေမယ့််လည်း ပိုချစ်ပြီး စိတ်ပးနေကြတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေလူမှုကွန်ရက်ကနေတော့တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ သူမရဲ့နေ့စဥ်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ ခုမှာလည်းသူမဟာအားလပ်ချိန်လေးမှာချည်လေးထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သေသေချာချာကြိုးစားပြီးထိုးနေတဲ့ချစ်စရာvideoလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်အလွမ်းပြေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။